Magnet Sarudzo-QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Permanent magineti chikamu chakakosha chehupenyu hwazvino Ivo vanowanikwa mukati kana kushandiswa kuburitsa dzinenge dzese zvanhasi zvirinani nhasi. Iwo magineti ekutanga anogara akaburitswa kubva kumatombo anowanzoitika anonzi lodestones. Matombo aya akatanga kufundwa makore anodarika mazana maviri nemazana mashanu apfuura nemaChinese uyezve nevaGiriki, vakawana dombo kubva kudunhu reMagnetes, kubva kwazvakatumirwa zita racho. Kubva ipapo, zvivakwa zvemagineti zvinhu zvakagadziridzwa zvakanyanya uye mazuva ano magineti ekugadzirisa zvinhu zvine mazana mazana enguva dzakasimba kupfuura magineti ekare. Izwi rekuti magineti anogara aripo kubva mukugona kwemagineti kubata iyo inokonzerwa nemagineti mutero mushure mekunge yabviswa kubva kune iyo magnetizing mudziyo. Midziyo yakadaro inogona kunge iri mamwe magineti akasimba anogara aine magineti, maelectro-magetsi kana maoiri etambo ayo akabhadhariswa magetsi. Kugona kwavo kubata chinji chemagineti kunovaita vanobatsira pakubata zvinhu munzvimbo, kushandura magetsi kune simba rechinangwa uye zvinopesana (mota nemagetsi), kana kukanganisa zvimwe zvinhu zvinounzwa pedyo navo.
Simba repamusoro remagetsi rinoita basa remagetsi riri nani. Kune vatengi vanoda rubatsiro rwekugadzira kana dhizaini yakaoma yedunhu, QM's timu yevanamazvikokota vekushandisa ruzivo uye vanoziva ruzivo rwekutengesa kumainjiniya vari pabasa rako. QM mainjiniya anoshanda nevatengi kuvandudza kana kusimudzira magadzirirwo aripo pamwe nekugadzira zvigadzirwa zvinovezwa izvo zvinoburitsa zvakakosha magineti. QM yakagadzira zvigadzirwa zvemagineti zvine simba zvine simba, yunifomu kana zvakasarudzika magineti anowanzotsiva magesi ane maginiti uye asina magadziriso emagineti. Vatengi vane chivimbo kana hey unounza rakaoma pfungwa kana pfungwa itsva iyo QM ichasangana nedambudziko irori nekudhirowa kubva pamakore gumi ehunyanzvi hwesainzi hwakavezwa. QM ine vanhu, zvigadzirwa uye tekinoroji iyo inoisa magnets kushanda.
Magnet kusarudzwa kwese kwese kushandiswa kunofanirwa kufunga nezvekutenderera kwemagineti nemamiriro ekunze. Ikoko kwakakodzera Alnico, saizi yemagineti inogona kuderedzwa kana inogona kuiswa maginiti mushure mekusangana mumagineti kutenderera. Kana ikashandiswa yakazvimiririra yezvimwe zvikamu zvedunhu, senge mune zvekushandisa kuchengetedzeka, iyo inoshanda kureba kusvika pahupamhi diji (inoenderana nerevheti coefferate) inofanira kunge iri huru zvakakwana kuita kuti magineti isashande pamusoro pebvi mune yechipiri quadrant demagnetization curve. Nezvekushandisa zvakaoma, Alnico magnets anogona kuve akaganhurirwa kune yakatangwa chiratidzo flux density kukosha.
A-chibereko chekushomeka kwekumanikidza kushushikana kune demagnetizing mhedzisiro nekuda kwekunze kwemagineti minda, kuvhunduka, uye tembiricha yekushandisa. Kune akakosha mashandisirwo, magineti eAlnico anogona kudzikiswa kudzikisira mhedzisiro iyi Kune makirasi mana emagineti ezvekushambadzira emazuva ano, rimwe nerimwe rakanangana nekuumbwa kwavo kwezvinhu. Mukati mega yega kirasi pane mhuri yemamaki ine yavo magineti zvivakwa. Aya makirasi akajairwa ndeaya:
NdFeB neSmCo vanozivikanwa pamwe chete seRare Earth magineti nekuti ese ari maviri akaumbwa nezvinhu kubva kuRare Earth boka rezvinhu. Neodymium Iron Boron (yakajairika nziyo Nd2Fe14B, inowanzo pfupikiswa kuNdFeB) ndiyo yekuwedzera yekutengesa kuwedzera kumhuri yezvinhu zvemazuva ano zvemagineti At kamuri tembiricha, NdFeB magnets a kuratidza soro ehupfumi ose magineti zvinhu. Samarium Cobalt inogadzirwa muzvikamu zviviri: Sm1Co5 uye Sm2Co17 - inowanzozonzi SmCo 1: 5 kana SmCo 2:17 mhando. 2:17 mhando, ine yakakwira Hci tsika, inopa hukuru hwakasimba kugadzikana kupfuura iyo 1: 5 mhando. Ceramic, inozivikanwawo seFerrite, magineti (yakajairika nziyo BaFe2O3 kana SrFe2O3) yakatengeswa kubva kuma1950 uye ichiri kuramba ichishandiswa zvakanyanya nhasi nekuda kwemutengo wavo wakaderera. Fomu yakasarudzika yeCeramic magineti ndeye "Flexible" zvinhu, zvinogadzirwa nekubatanidza Ceramic upfu mune inochinja bhainda. Alnico magineti (akaumbiridzwa Al-Ni-Co) akatengeswa muma1930 uye achiri kushandiswa zvakanyanya nhasi.
Izvi zvinoshandiswa zvinoturikidzana huwandu hwezvivakwa zvinogara zvakasiyana siyana zvekushandisa. Izvi zvinotevera kupa chinangwa chakakura asi chinoshanda chechinhu chinofanira kufungwa pakusarudza chakakodzera chinyorwa, giredhi, chimiro, uye saizi yemagineti kune rimwe basa. Chati iri pazasi inoratidza chaiwo maitiro ezvinyorwa zvakakosha zvemakiredhi akasarudzwa ezvivakwa zvakasiyana siyana zvekuenzanisa. Iyi tsika ichakurukurwa zvakadzama muzvikamu zvinotevera.
Magnet Material Kuenzanisa
* T max (upenyu hunoshanda hwekushisa tembiricha) ndeyekureva chete. Iyo yepamusoro inoshanda tembiricha yekushisa yemagineti chero ipi zvayo inoenderana nedunhu iro magineti riri kushanda mukati.
Magnets angangoda kuve akakwenenzerwa zvichienderana nesarudzo yavakarongerwa. Kubata magnets kunovandudza kutaridzika, kushaya kutu, kudzivirirwa kubva pakupfeka uye inogona kunge yakakodzera kune maficha mune akachena mukamuri mamiriro.
Samarium Cobalt, Zvigadzirwa zveAlnico zvinogadzirisa kutu, uye hazvidi kuti zvifukidzwe zvichirwisa kutu. Alnico yakarongedzwa zviri nyore nehunhu hwekuzvishongedza.
NdFeB magnets anonyanya kukanganisika nemarara uye anowanzochengetedzwa nenzira iyi. Kune akasiyana machira ekuvhara akakodzera magnets asingaperi, Haasi ese marudzi ese ekubiridzira anozove akakodzera pane ese zvinhu kana maginiti geometry, uye yekupedzisira sarudzo ichaenderana neshandisirwo uye nharaunda. Imwe sarudzo ndeyekuisa magineti mune yekunze casing yekudzivirira kutu uye kukuvara.
Kudzivirirwa Kwenguva pfupi
Kunaka kurwisa Humidity
Zvakanaka Pakupokana neMunyu Spray
Yakanaka Kupesana neSalt Spray
Yakakwirira Kupesana nehunyoro
Dema, Tsvuku, Grey
Yakanaka Kupesana Nekunyorova
Yakanakisa Kupokana Nehunyoro, Munyu Spray. Yepamusoro Mukudzivirira Solases, Gasi, Fungi uye Hutachiona.
Magineti anogara aripo anopihwa pasi pemamiriro maviri, Magnetized kana isina maginiti, haawanzo kuvezwa polarity wawo. Kana mushandisi achida, tinokwanisa kuisa mucherechedzo nenzira dzakabvumiranwa pane. Kana uchirongedza kurongeka, mushandisi anofanira kuzivisa mamiriro ekupa uye kana mucherechedzo we polarity uri madikanwa.
Iyo shamba yemagineti yemagneti isingagumi inoenderana neyekusingaperi magineti rudzi rudzi uye simba rayo rekumanikidza. Kana iyo magineti inoda magnetization uye demagnetization, ndapota taura nesu uye tibvunze isu maitiro.
Pane nzira mbiri dzekurongedza magineti: DC munda uye dhizaini yemagineti.
Pane nzira nhatu dzekudzikisa magineti: demagnetization nekupisa inzira yakakosha yekuita. demagnetization mumunda we AC. Demagnetization mumunda weDC. Izvi zvinobvunza yakasimba kwazvo magineti uye yakakwirira demagnetization hunyanzvi.
Maumbirwo ejometri uye maginiti gwara remagineti risingagumi: mune musimboti, tinogadzira magineti asingaperi mumhando dzakasiyana siyana. Kazhinji, zvinosanganisira block, disc, mhete, chidimbu etc. Mufananidzo wakadzama weiyo magnetization giraidhi iri pazasi:
(Midhiya Inoratidza Chairo Maitiro Ekuchinjisa)
inotungamirwa kuburikidza nekukora
yakarongedzwa zvakananga muzvikamu
yakatenderwa gare gare kuwanda pachiso chimwe
multipole yakatungamirwa muzvikamu pane diamondi rekunze *
multipole yakatenderedzwa muzvikamu pachiso chimwe
multipole yakatarisana muzvikamu pane zvemukati diam *
zvese zvinowanikwa se isotropic kana anisotropic zvinhu
* inongowanikwa mu isotropic uye zvimwe anisotropic zvinhu chete
Kunze kwechidimbu munzira yekuda kwemagineti, hupamhi hwepamhepo hwesimba risingaperi haupfuuri 50mm, iyo inogumisirwa nemunda wekutarisa nemidziyo yekukanganisa. Iyo dhiziri mu unmagnetization gwara inosvika 100mm.
Iko kushivirira kunowanzoita + /- 0.05 - +/- 0.10mm.
Mubvunzo: Mamwe maumbirwo anogona kugadzirwa zvinoenderana nemutengi wevatengi kana yebhuruu kudhinda
1. Magneti anogara narinhi magneti ane simba magineti inokwezva iyo iron nezvimwe zvinhu zvemagineti zvakavakomberedza zvakanyanya. Mumamiriro ezvinhu akajairika, iye anoshanda maneja anofanirwa kuve anongwarira kuti asakuvara. Nekuda kwesimba remagineti yakasimba, magineti makuru ari padyo navo anotora njodzi yekukuvara. Vanhu vanogara vachigadzirisa magneti aya zvakasiyana kana necheni. Mune ino kesi, isu tinofanirwa kushambadzira magurovhinzi ekudzivirira ari kushanda.
2. Mune mamiriro ezvinhu aya emagetsi ane simba, chero chinhu chine musoro chemagetsi nemamita ekuedzwa anogona kuchinjwa kana kukuvara. Ndokumbira kuti uone kuti komputa, inoratidza uye magidhiya, sengeti maginiti, magineti tepi uye vhidhiyo rekodhi tepi nezvimwe, zviri kure nezvinhu zvakagadziriswa, taura zviri kure kupfuura 2m.
3. Kubatana kwemasimba anokwezva pakati pemagneti mairi asingaperi kunounza kupenya kukuru. Naizvozvo, zvinhu zvinopisa kana zvinoputika hazvifanirwe kuiswa zvakavakomberedza.
4. Kana iyo magineti ichinge yaratidzwa kune hydrogen, zvinorambidzwa kushandisa magnets asingaperi pasina dziviriro coating. Icho chikonzero ndechekuti iyo sorption yehydrogen ichaparadza iyo micostosition yemagineti uye ichitungamira pakugadziriswa kwemasimba emagineti. Nzira chete yekudzivirira nayo magineti zvinobudirira ndeyekusungira maginiti mune imwe nyaya uye kuisimbisa.